Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Aragti kale oo ku wajahan Xaajo.com iyo Wararka arrimaha nabadda DDSI.
Aragti kale oo ku wajahan Xaajo.com iyo Wararka arrimaha nabadda DDSI.
January 7, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Waxaan ahay xubin kamid ah akhristayaasha wararka Xaajo.com, waxaanan ku noolahay dalka Ireland. Sidoo kale waxaan kamid ahay dadka taageersan ama weligiiba taageersanaa in Deegaanka nabad lagu soo dabbaalo.Aad baan u daneeyaa wararka ku saabsan nabad-raadinta ee ay soo tebiso Xaajo.
Intaa kadib, waxaan jeclahay inaan wax yar ka idhaahdo laba qodob oo kala ah:
 In Xaajo joojiso wararka ku saabsan nabad-raadinta laga dhexwado onlf iyo Xukuumadda Itoobiya iyo in kale.
Inaan fikir ka soo jeediyo erayga QURBAJOOG ee loo adeegsado dadka dibedaha ku nool.
Xaajo waa hay’ad tebisa warar la xidhiidha deegaanka Somalida Itoobiya, dadka ku xidhanna waa badan yihiin sidaan qabo. Waxaan maamulka Xaajo ku ammaanayaa wakhtigooda, maskaxdooda iyo maalkooda ay geliyaan quudinta dadkooda. Waxaa iyana muhiin ah in la ogaado in dadka dibedaha jooga ay yihiin war ku nool, wararkuna waa kala jiraane kuwa ku saabsan nabad u raadinta gobolka Somalida Itoobiya waa kuwa ka muhiimsan cuntada an cunayno, maxaa yeelay xanuun aad u badan ayey nabad la’aantu ku haysaa dadka Deegaanka, haddii marka dad jiran la dhoho daawaa la idiin helayaa runtii way u dhegataagayaan illaa ay kasoo gaadho daawadaasu (qof ooman biyahan hoo baa deeqda). Haddii Xaajo naga joojiso neecawda nabadda ee ay noo soo tebiso, waxaan lumin doonaa dulqaadkii iyo samirkii an ku sugi lahayn dhammaadka arrinta, waxaana nagu beermi doona walwal joogto ah (war tolow xaggee xaal marayaa).
Hadaba, anigu ma qabo in Xaajo joojiso wararkii ku saabsanaa halka wax marayaan, balse waxaan qabaa in warka loo sheego si soo dhaweyn ah oo faqrxadi ku dheehan tahay. Tan kale, onlf waa qayb kamid ah bulshada deegaanka Somalida ee ma aha dad shisheeye ah, mana jirto qowmiyad dhammaanteed hal fikir isku raacsan, mucaarad iyo mu’ayid waa wax caalamka caan ka ah, la yaabna male, balse waxaa xun in mucaaradnimadu bulshada burbur iyo dib u dhac ku keento sida ka dhacday Somalia.
Qof kasta oo u dhashay Deegaanku waa xaqle u baahan inuu helo xuquuqdiisa muwaadinimo, isla markaana qof kasta oo muwaadin ah waxaa dadka iyo dalku ku leeyihiin waajib ah inuu ilaaliyo xasiloonida dalka iyo nabadgelyada dadka (Rights and obligations). Si taas loo helo waxaa loo baahan yahay in laga fogaado wax kasta oo dadka kala gayn kara, ka cadhaysiin kara, dagaal ku jirabi kara ama u horseedi kara inay ka leexdaan jidkii suubanaa ee lagu socday. Waxaa jira odhaah caalami ah oo dhahaysa, “Dhibic malab ahi waxay ka macaan tahay fuusto Dacar ah”, waxaan uga jeedaa, intaan adeegsan lahayn erayo kicin kara shucuurta dhinacyada loo kala dabqaadayo waxaa igala fiican inaan adeegsanno erayo dhinacyada ku dhiiirin kara inay isu soo dhawaadaan oo macmacaan. Waxaan qaybtan ku soo khatimayaa, kama maaranno wararka nabadraadinta ee Xaajo noosoo tebiso, waana kuwa u roon qalbiga qof kasta oo jecel in deegaanka nabadi ka dhalato.
Haddaan u imaado Erayga Qurbajoog, waxaan filayaa in eraygu asal ahaan kasoo jeedo carabi (Qurbe). Dadka Deegaanku wuxuu ku kala nool yahay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Sidaas darteed waxaa ila haboon in loo helo laba eray oo loo kala adeegsado marka qayb walba laga hadlayo. waxaa aniga ila habboon in Xaajo hirgeliso labada eray ee kala ah, “DALJOOG” iyo “DIBADJOOG”.
Daljoog- waa dadka sharafta leh ee waddanka ku hadhay, una adkaystay wixii dhacay muddadii Deegaanka colaaduhu ka jireen, isla markaasna munaafacaadsaday khayraadkii dalka, waxayna mudan yihiin in loo jeediyo ammaan gaar ah.waa dadka dalka uga baxay siyaabo kala duwan, naftoodana ku maareeya meelo an dalkoodii ahayn oy marti ku yihiin dhibna ku qabaan, isla markaasna si dadban uga qayb gala horumarka dalka iyo nolosha dadka, inkastoo qaarkood dhibaato ka abuuraan Deegaanka.
Sababta an labadan eray u doortay waxaa weeye, waa laba eray oo isudhigan ah (opposite), isla markaasna asal ahaan af Somali ah.
Aad baad u mahadsan tihiin.